Mialà amin'ny tavy amin'ny fampihetseham-batana
Fanazaran-tena hampihena ny lanja ao an-trano
Ny fihenan'ny lanjany amin'ny vavony
Torohevitra momba ny fihenan-danja be loatra amin'ny vavony
Ohatrinona ny fanazaran-tena tokony hatao mba hihena?
Mampihena lanja amin'ny fanatanjahan-tena? Tena azo atao ve izany? Na inona na inona fanatanjahan-tena fidinao, ny zava-dehibe dia ny fanaovan-javatra amin'ny farany. Ny karazana fanatanjahan-tena maharitra rehetra dia miantoka ny fandoroana tavy. Nampitomboina ny toe-pahasalamana ary voatsangana ny hozatra.
Fanatanjahantena 5 hampihena ny lanja
Hitanay ny fanatanjahantena fihenan-danja 5 mahomby indrindra ho anao.
Ny fihazakazahana na ny fihazakazahana no mpamono matavy voalohany.Raha mihazakazaka dia tohanan'ny hozatra ny tongotra sy ny valahana indrindra.
Fitness amin'ny alàlan'ny fanatanjahantena
Miaraka amin'ny hozatra nohamafisina sy nofanina dia mahavita fomba mihazakazaka tsara kokoa ianao ary manana taha metabolic basal ambonimbony kokoa. Raha manomboka mihazakazaka ianao dia tokony hitandrina ary manomboka miadana. Isaky ny dingana rehetra dia intelo mihetsika ny lanjan'ny vatana amin'ny lohalika sy ny kitrokely. Ny hazakazaka no fanatanjahantena ivelany tsara indrindra ary azo atao amin'ny toetrandro rehetra. Tena mahafinaritra ary milatsaka amin'ny rindrina ny kilao.
Ilay mpamatsy fanta-daza misy tehina. Fanatanjahantena maharitra ary safidy tsara amin'ny jogging. Ny fandehanana any Nordic dia fomba malefaka kokoa handoroana kaloria. Ity fanatanjahan-tena ity dia mora amin'ny tonon-taolana, fa ny hazo kosa dia tokony hampiasaina tsara. Ny fandehanana miaraka amin'ny tapa-kazo dia mety indrindra ho an'ny vao manomboka izay te hampitombo ny tanjany. Tsy ny tongotra sy ny ambany ihany no voaofana, fa ny hozatry ny soroka sy ny vatan'ny ambony koa. Fanatanjahantena mora sy mampandroso ny fahasalamana ho an'ny rehetra. Sahiran-tsaina ny vatana iray manontolo ary may ny tavy.
Ny filomanosana dia mety indrindra ho an'izay te-hikarakara ny tonon-taolana. Ny filomanosana dia fanatanjahantena maharitra. Izy io dia miantoka fanamafisana tsara ny hozatra iray manontolo. Raha manambatra fomba milomano isan-karazany ianao, dia fiofanana mandrindra ihany koa.
Ny bisikileta dia anisan'ny fampiofanana maharitra ihany koa. Ity fanatanjahan-tena ity dia mampiasa indrindra ny hozatry ny tongotra. Ny fihetsika tsy mahazatra dia mety hitarika fanaintainana haingana any am-piandohana. Ny haavon'ny seza marina dia afaka misoroka. Tokony ho afaka hanitatra ny tongotrao ianao rehefa midina ny pedal. Noho izany, tokony hanomana fiofanana matanjaka fanampiny ho an'ny kibonao sy hozatrao ianao.
Ny mandeha an-tongotra no fanatanjahan-tena mety ho an'izay te-hanomboka indray. Amin'ny fandehanana dia afaka mizatra mora foana amin'ny gadona mihetsiketsika ianao. Ity fanatanjahan-tena ity dia mety indrindra ho an'izay te ho salama ary malemy indrindra amin'ny tonon-taolana. Ny teknika mety dia tokony hianarana koa rehefa mandeha. Ho fanampin'ny akanjo mihazakazaka mety dia zava-dehibe ny kiraro mihazakazaka. Fanatanjahantena lehibe ho an'ny fihenan'ny lanja mahasalama.
Izay te hihena dia mieritreritra ny fampiharana mety. Mialà amin'ny tavy amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena mety, mahafinaritra sy mandeha izany.
Na any amin'ny birao eo amin'ny birao, na any amin'ny efitranon'ny hotely, ny yoga, ohatra, dia miasa tanteraka ihany koa ao an-trano. Vitsy dia vitsy ny olona amin'ny fiainany matihanina no mbola manana fotoana sy fironana hanatanteraka programa fitomboana goavambe aorian'ny asa. Ny adin-tsaina any am-piasana sy ny hafainganam-pandehan'ny fiainana andavanandro dia tsy mamela antsika fotoana hanaovana fanatanjahan-tena.
Ny fiofanana dia midika hoe mahavita fiofanana ara-batana amin'ny fampiharana tena manokana ianao. Voalohany, eritrereto hoe faritra amin'ny vatana inona no tianao hampiofanina. Te-hihazona ny faritra misy olana ianao, hanangana hozatra na hanatsara ny toe-pahasalamanao? Satria ny fanazaran-tena sy ny hamafiny dia mifototra amin'ity fiheverana ity. Miankina amin'izany koa ny firafitry ny fanazaran-tena isan-karazany, ny isa ary ny famerimberenana ary ny fampiasana fitaovana toy ny tady, dumbbells na bandy mihinjitra.
Ny fampihetseham-batana dia mety misy fanatanjahan-tena izay misy gymnastics, toy ny Pilates sy yoga. Saingy izy ireo koa dia mety ahitana fampihetseham-batana na fanazaran-tena ho an'ny faritra misy ny vatana.
Ny fampihetseham-batana dia fananganana mahery vaika ary fitomboan'ny fahasalamana. Ny famonoana ho faty no zava-dehibe indrindra. Ny fanazaran-tena ratsy amin'ny teknika tsy mety dia mety hanimba bebe kokoa noho ny tsara. Ny fampihetseham-batana dia midika fa zatra ny fihetsiketsika amin'ny hetsika vaovao miadana ary tsy misy fitaovana ary avy eo mampitombo ny asa be ataonao.
Mba hitomboan'ny hozatra dia mila proteinina izy ireo. Mba hampiasana araka ny tokony ho izy ny fanentanana ateraky ny fanazaran-tena amin'ny hozatra, dia tokony ho mety ny sakafo.
Mila fiatoana ny fampiofanana. Tsy mitovy amin'ny fanatanjahan-tena maharitra izany. Tokony hiala sasatra amin'ny fampiofanana ianao mandritra ny iray andro, fara fahakeliny. Ny tsara indrindra dia tokony hampiofana ny faritra samihafa amin'ny vatana isan'andro ianao.
Enina volana eo ho eo vao manazatra hozatra iray kilao. Raha tsy tapaka ny fiofanana dia ny fiofanana dia antoky ny fahombiazana amin'ny fananganana hozatra. Mazava ho azy fa tokony ho marina koa ny sakafony. Tsy dia sahy manao an'ity fanatanjahantena ity ny vehivavy. Matahotra izy ireo sao hanangana hozatra, toy ny fanaon'ny lehilahy.
Amin'ny fiandohan'ny fampihetseham-batana, ny akanjo dia mety ho henjana. Fa ny tavy kosa nivadika hozatra haingana ary nihatsara hatrany ny sary. Ny fanatanjahan-tena dia fanatanjahan-tena mahomby ho an'ny lehilahy ihany fa ho an'ny vehivavy koa. Andramo izany, mendrika izany. Ho salama sy ho salama kokoa ianao. Fanatanjahantena mitondra fahombiazana betsaka ary afaka manova ny fiainanao.
Raha te hijanona salama amin'ny fotoana maharitra ianao na te hihena, dia tsy ho vitanao izany raha tsy misy fanatanjahan-tena. Ny fanatanjahan-tena dia ampahany lehibe amin'ny fahaverezan'ny lanja. Tsy mila misoratra anarana amin'ny gym ianao amin'izany. Afaka manao fanatanjahan-tena mampihena lanja ao an-trano ianao ary hahomby tokoa.
Raha te hanao fanatanjahan-tena ao an-trano ianao dia azo antoka fa misy tombony sasany.
Voalohany indrindra, manangona vola be ianao izay mety ho laninao tamin'ny famandrihana tao amin'ny gym. Azonao atao ny mividy fitaovana fanatanjahan-tena tsara amin'izany. Afaka mampiofana amin'ny alàlan'ny DVD fanatanjahan-tena ianao na amin'ny lanjan'ny vatanao manokana maimaim-poana. Raha manao fanatanjahan-tena ao an-trano ianao dia afaka mijery ny andian-tantara tianao indrindra amin'ny fahitalavitra mandritra ny bisikileta fanatanjahan-tena na mihaino mozika tianao.
Tombony iray hafa koa ny tsy mila mandeha. Eo akaiky eo ihany ny gym. Tsy mila manangona kitapo gym ianao na mividy akanjo lafo vidy sy lafo vidy. Tsy ilaina ihany koa ny mandany fotoana fiandrasana lava eo alohan'ny fitaovam-piofanana, toy ny fanaon'ny studio sasany, indrindra amin'ny harivariva hariva.
Raha te-hanao fanatanjahan-tena ao an-trano ianao dia mila fifehezana ihany koa, mazava ho azy, fa izany koa no ilainao raha te-handeha amin'ny gym ianao.
Ny fampihetseham-batana tena mandaitra dia ny fiofanana amin'ny lanjan'ny vatanao. Ny vatan'olombelona dia fahagagana ary mahavita zavatra izay tsy vitan'ny milina fanatanjahan-tena. Afaka mampiasa hozatra bebe kokoa amin'ny vatanao ianao fa tsy amin'ny fitaovana fampiofanana hafa. Izany dia mahatonga ny fiofanana hahomby kokoa noho ny teo aloha. Voaofana ny hozatra ary mandoro kaloria ny vatana. Izany no fomba hanesoranao ny tavy haingana sy mahomby.
Rehefa ketrakao ny vatanao, dia hihamafy ny hozatra lalina. Manampy amin'ny fitazonana ny hetsika sy ny fandanjana izany. Amin'ny fanazaran-tena sy fanazaran-tena amin'ny vatanao dia ny vavony sy ny lamosinao no tena voaofana. Amin'izany dia azonao atao tsara ny misoroka na manamaivana ny fanaintainan'ny lamosina. Manatsara ny fihetsika ihany koa. Ny fanazaran-tena ao an-trano dia mora kokoa ary sarotra tanterahina kokoa, mba hahafahanao manitsy tsara ny tanjaky ny vatanao manokana.
Azonao atao ihany koa ny manao fampihetseham-batana amin'ny dumbbells sy lanjany ho an'ny fihenan-danja ao an-trano. Na mandeha tsy tapaka amin'ny trainer cross, stepper na ergometer ianao.
Ho an'ireo izay tsy manam-potoana firy, ny fihenan'ny lanja ao an-trano dia safidy tsara amin'ny gym. Afaka manangona vola be ianao ary mbola hahomby.
Rehefa manakaiky ny lohataona dia amin'ny fotoam-pahavaratra ireo gym sy fitaovana fanaovana fanatanjahan-tena avy amin'ny magazay na Internet. Natosika ianao dia manomboka amin'ny sit-ups, crunches ary fanazaran-tena amin'ny kibo. Mahafinaritra ireo hetsika ara-panatanjahantena ary atao am-pahazotoana ihany koa mba hanakaikezana ny tanjona napetraka.
Azo atao ve ny manary lanja manokana amin'ny vavony? Tsy azo atao mihitsy ny mamoy lanja eo amin'ny vavony fotsiny. Ny toerana ahafahanao mamoy lanja mora kokoa ary ny toerana ahazoanao lanja eo no ho eo dia tapa-kevitra ny fototarazo.
Saingy tsy olana izany satria mora kokoa noho ny, ohatra, amin'ny feny, tanana, valahany na vodiny ny fihenan'ny lanja amin'ny vavony.
Raha te handany lanja manokana amin'ny vavoninao ianao, dia mila sakafo ara-pahasalamana voalohany sy loha indrindra, fanatanjahan-tena mety ary antony manosika tsara indrindra.
Ny fampihetseham-batana fotsiny dia tsy ampy hahavery kilao. Ny sakafo ihany koa dia tsy maintsy ovaina. Manapaka gliosida, mihinana tavy kely ary manaova fanatanjahan-tena. Ny fampifangaroana sakafo ara-pahasalamana sy karbaona ambany dia mahasoa anao hanalefaka ny tavy kibo. Mazava ho azy fa maharitra fotoana fohy ny fanalana ny kibo satria tsy maintsy avadika hozatra ny tavy.
Misotroa rano 2-3 litatra. Tokony hialana amin'ny zava-pisotro mahamamo sy alikaola aloha ianao.
Aleo voa, voankazo ary legioma iray manontolo.
Aza atao sakafo haingana, mofomamy sy vatomamy mba hialana amin'ny filan'ny nofo.
Kitiho eo amin'ny vata fampangatsiahana sary ny sary avy amin'ny taonanao mahia. Afaka mandrisika izany.
Angamba mitady olona mitovy hevitra ianao izay te hihena miaraka aminao. Betsaka ny zavatra mora kokoa amin'ny mpivady na amin'ny vondrona iray.
Ilaina ny faharetana. Tokony hampahatsiahy anao foana ny halehibeny ho mahia sy mahia ianao.
Soraty amin'ny refy fandrefesana ny refin'ny valahanao ary ho hitanao fa miempo ny tavy.
Raha te hanala ny vavoninao ianao amin'ny farany, dia tokony hampiditra fanatanjahan-tena bebe kokoa amin'ny fiainanao isan'andro ankoatry ny fiovan'ny sakafo. Mandoro kaloria betsaka ny fanatanjahan-tena maharitra. Fa tokony hampidirina amin'ny fiainana andavan'andro intelo isan-kerinandro. Tokony hiasa amin'ny fananganana hozatra koa ianao ary hanao fanazaran-tena amin'ny kibo.
Voaporofo ara-tsiansa fa ireo izay mihinana sakafo matavy sy be tavy dia tsy mahazo lanja haingana. Ny proteinina dia mameno anao ary salama. Ny omelika atody ho an'ny sakafo maraina dia mameno kokoa noho ny serealy vita amin'ny ronono tsy matavy.
Ataovy ny lesoka amin'ny fianjerana amin'ny lamina taloha aorian'ny sakafo mahomby. Raha tsy izany dia hitranga haingana ny effets yo-yo.
Tena toy izany ve? Tsy azo sarahina ny fanatanjahan-tena sy ny fihenan-danja? Tsy miafina izany! Ny fampihenana lanja amin'ny fomba mahomby dia tsy midika inona fa ny fihinanana angovo bebe kokoa noho ny laninao.
Tsy mila manao fanatanjahan-tena isan'andro ianao mba hihena. Be loatra izany ary zara raha misy olona afaka mampiditra azy ireo amin'ny fiainany andavanandro.
Misy torolàlana tsotra:
Izay manao fanatanjahan-tena dia tokony hamelombelona indray. Mila fotoana ny hozatra mba ho sitrana.
Ireo mpitia fanatanjahantena dia afaka manao fanatanjahan-tena fiaretana isan'andro,
Ireo vao manomboka kosa dia tokony hanomboka miadana.
Ny fanaovana fanatanjahan-tena in-droa isan-kerinandro dia fomba iray tena mahomby hanampiana anao hampihena.
Zava-dehibe ihany koa ny toetran'ny sisa amin'ny fiainana andavanandro. Ho fanampin'ny fanatanjahantena dia zava-dehibe ny hetsika rehetra. Ho salama kokoa ianao raha mandeha matetika ary bisikileta ihany koa. Ny habetsaky ny fanatanjahan-tena ilaina amin'ny famoahana lanja dia miankina amin'ny fiainanao isan'andro ihany koa.
Toy izany no fiasan'ny fihenan'ny lanja - fanatanjahan-tena miaraka amin'ny sakafo mety
Na dia mandeha any amin'ny gym isan'andro aza ianao raha tsy misy sakafo ara-dalàna dia tsy hihena ianao. Tena zava-dehibe ny hozatra amin'ny fahaverezan'ny lanja. Mila proteinina ny vatana hananganana hozatra. Mihinàna sakafo matavy, mandanjalanja nefa be proteinina. Ny fanatanjahan-tena ilaina mba hahavery lanja dia tsy mora valiana ihany koa, satria tsy mitovy amin'ny olona rehetra ny valiny.
Zava-dehibe ny fanatanjahanao matetika. Miezaha mampiditra fanatanjahan-tena amin'ny fiainanao andavanandro ary jereo ho toy ny mahazatra ny fampihetseham-batana. Ireo mpiara-miasa izay manana tanjona mitovy amin'izany dia afaka manentana tokoa. Isaky ny manao fanatanjahan-tena mandritra ny herinandro ianao dia tsy zava-dehibe izany; zava-dehibe kokoa ny manao fanatanjahan-tena matetika.
Raha te hiditra amin'ny magazay matavy ianao dia mila mianatra manova ny tavy ho lasa angovo ny vatanao. Ho an'izany, ny selan'ny hozatra dia mila oksizena sy fotoana hamokarana angovo. Izany dia mitranga indrindra rehefa bisikileta, mihazakazaka ary mandeha. Izy io dia fantatra ihany koa amin'ny fiofanana amin'ny metabolisma matavy. Raha te ho very kilao vitsivitsy ianao ary te hampitombo ny fiaretanao indray dia tokony hampihetsi-po roa na intelo isan-kerinandro ianao. Ny fiofanana maharitra sy ny fampiofanana tanjaka kendrena dia nanaporofo ny lanjan'izy ireo. Milomano, bisikileta ary mandeha an-tongotra dia mety amin'izany. Tsy maintsy jerena ny hamafiny.
Rehefa afaka roa minitra dia manomboka miasa ny metabolisma matavy. Arakaraky ny faharetan'ny faharetana no avo kokoa ny may. Ampitomboy ny tanjakao isaky ny mandeha. Atombohy miadana fa henjana. Izay manana fotoana kely fotsiny dia afaka mampiofana mafy indray mandeha isan-kerinandro mba hahombiazana.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 6. Oktobra 2020 15. Jolay 2021 Sokajy Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tenaKeywords mihena, Fitness, Fanatanjahantena
indray Lahatsoratra taloha: Iza no karazana fitiavana anao | Fiaraha-miasa
more Lahatsoratra manaraka: Spider toy ny biby fiompy